XOG:- Mas’uuliyiin caan ah oo ka mid noqon doonna musharixiinta Hirshabeele ku tartameeysa Aqalka Sare – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Mas’uuliyiin caan ah oo ka mid noqon doonna musharixiinta Hirshabeele ku tartameeysa Aqalka Sare
Waxaa isbuuca soo socda la filayaa in xildhibaanada maamulka Hirshabeele ay qabtaan doorashada lagu soo dooranayo 8-da xubnood ee maamulkaasi u matali doonna Aqalka Sare ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Ilo xog-ogaal ah aynu heleyno ayaa sheegaya in qaar ka mid ah musharixiinta ku tartami doonta kuraasta Hirshabeele ee Aqalka sare ay ka mid noqon doonaan, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed, ra’iisul wasaarihii hore ee dowladii KMG ahayd Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo Muuse Suudi Yalaxoow oo isna hore xildhibaan uga ahaa baarlamaanka KMG ee Soomaaliya.
Seddaxdaasi mas’uul ayaa la sheegayaa inay haatan ugu cad-cad yihiin xubnahaasi.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa marka hore soo diyaarin doonna liiska ay ku qoran yihiin dhamaan musharxiinta tartameeysa, waxaana markaasi kadib loo gudbin doonnaa xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi, si ay uga doortaan 8-da xubnood ee ka mid noqonaya Aqalka Sare.
Sidoo kale, waxaan meesha ka marneen qoondada ay haweenka ku leeyihiin kuraasta Aqalka Sare, taas oo noqon doonta in 2 dumar ay kasoo galaan 8-da xubnood uu maamulka Hirshabeele ku yeelanaayo Aqalka Sare ee baalamaanka cusub Soomaaliya.